Michael Ballack ayaa qiray inuu ku dhawaaday sanado kahor inuu u ciyaaro kooxaha waa weyn %
By Ramzi Yare	 Last updated Mar 29, 2020
Halyeeyga xulka qaranka Germany iyo kooxda Bayern Munich ee Michael Ballack ayaa qiray inuu ku dhawaaday sanado kahor inuu ku ciyaaro Maaliyadaha kooxaha Real Madrid iyo Barcelona, kahor inta aan lagu guuldarreysan wadahadalada.
Intii lagu gudi jiray wareysi uu siiyay shabakada Sky Sports halyeeyga xulka qaranka Germany iyo kooxda Bayern Munich ee Michael Ballack ayaa wuxuu yiri “Waqtigeygii waan ku raaxeystay koox kasta oo aan u ciyaaray, waligeyna dib ma eegin, in kastoo ay jireen xulashooyin kale oo badan.”
Waxaan qarka u saarnaa inaan u wareego, sababtoo ah waxaan wada gaarnay heshiis, kaddib markii ay wada hadleen mas’uuliyiinta labada kooxood, laakiin qiimaha heshiiska ayaa istaagay kaddib markii leysku fahmi waayey”.
Intii lagu jiray mudadaas, waxaan galay wada hadalo badan, haddii ay ahaan laheyd wada hadaladaas iyo xitaa waxyaabaha aan si wanaagsan ugu socon kooxda.
Tusaale ahaan waxaan ka hadleynay dhisida kooxda iyo sida ay kaga fiicnaan laheyd sidii hore oo ay u noqon laheyd mid awood badan, gaar ahaan inaan u tartano hanashada tartanka Champions League.”